iCloud Nchekwa Full? Adịla akwụ ụgwọ maka iCloud ndabere ọzọ. - Iphone
kedu ihe ọ pụtara ma ọ bụrụ na iphone gị na -ekpo ọkụ
ekwentị nwere nsogbu ijikọ na wifi
Enweghị m ike ihichapụ foto na iphone m
iCloud Nchekwa bụ otu n'ime ihe ndị kasị misused na ghọtahiere atụmatụ nke iPhone. M hụrụ n'anya Apple ngwaahịa, ma ọ dịghị ụzọ ọzọ na-etinye nke a: N'ọnọdụ ka ukwuu, ịzụta iCloud Nchekwa bụ na-enweghị isi na ị gaghị akwụ ụgwọ ya . Na 99% nke ikpe, ị gaghị akwụ ụgwọ ego ọ bụla iji kwado iPhone na iPad gị n'ụzọ zuru ezu . Aga m akọwa ezigbo ihe kpatara ya ihe mere gị iCloud Nchekwa jupụtara , ihe mere iPhone gị akwadobeghị na iCloud maka izu , esi edozi iCloud ndabere maka ezi.
Imirikiti ndị mmadụ ekwenyeghị na ọ ga-ekwe omume, mana ka m doo anya: Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ga-aghọta otu esi kwado ndabere iPhone, iPad, na foto gị na iCloud n’akwụghị ụgwọ maka Nchekwa iCloud .
Ọ bụrụ na ị hụla ozi dịka 'iPhone a akwadobeghị n'ime izu', 'iPhone enweghị ike ịkwado n'ihi na ezughị ezu nchekwa iCloud dị', ma ọ bụ 'Ezughị Nchekwa', echegbula. Ha ga-apụ tupu ị gụchaa isiokwu a.
M dere na mbụ post a mgbe ọtụtụ mmadụ rịọrọ maka enyemaka na iCloud mgbe ha gụsịrị akwụkwọ m banyere Ndụ batrị iPhone . N'ime ọnwa 18 kemgbe m bipụtara ya, Apple edegharịrị ma weghachite atụmatụ ọ bụla m tụlere n'isiokwu ahụ, ya mere, m na-edegharị ya site na ala.
Nchekwa iCloud na iCloud Drive na iCloud ndabere na iCloud Photo Library, Oh My! (Ee, ọ dị ọtụtụ)
Enweghi nghọta nke nsogbu a na-enweghị nghọta ndị egwuregwu na egwuregwu ahụ, yabụ anyị kwesịrị ịmalite ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya, ị bụ ebe ị kwesịrị ịnọ. Ka anyị were ha n’otu n’otu:
iCloud Nchekwa bụ mkpokọta ego nke ohere nchekwa dị na iCloud. Ọ bụ ihe ị na-akwụ ụgwọ. Onye obula na - enweta 5GB (gigabytes) n’efu. Nwere ike iwalite nchekwa gị na 50GB, 200GB, ma ọ bụ 1TB (1 terabyte bụ 1000 gigabytes), na ụgwọ ọnwa ọ bụla adịghị njọ - mana ọ bụ adịghị mkpa . Anyị na-edozi nsogbu ugbu a nke ga - adịkwu oke ọnụ na oge.
Ozugbo iCloud Nchekwa gị jupụtara, iPhone gị ga-akwụsị ịkwado iCloud ruo mgbe ị zụrụ ohere nchekwa ọzọ ma ọ bụ hapụ ebe nchekwa na iCloud.
Ndabere iCloud bụ atụmatụ na iPhones, iPads na iPods nke na-akwado ngwaọrụ gị dum na iCloud, ọ bụrụ na ihe adịghị mma mere. Ikwesiri iji iCloud ndabere. Ma ọ bụ ekwentị mposi ma ọ bụ ịhapụ ya n’elu ụlọ ụgbọ ala gị, iPhones na-ebi ndụ dị egwu ma ị kwesịrị mgbe niile nwee nkwado ndabere.
iCloud Backups agụ megide gị dị iCloud Nchekwa. (’Ll ga-ahụ ihe kpatara m ji kwuo nke a na nkeji.)
iCloud Drive bu ihe ohuru nke na-enye ohere ngwa na Macs, iPhones, na iPads iji mekọrịta faịlụ site na iji iCloud. Ọ dị ka Dropbox ma ọ bụ Google Drive, mana ọ na-agbanyekwu na sọftụwia Apple n'ihi Apple mere ya. iCloud Drive na-ekenye faịlụ dị ka dọkụmentị na mmasị ndị ọrụ na-enweghị nnukwu ihe ịmalite, yabụ n'ọtụtụ oge, ọ nweghị mmetụta dị ukwuu na mkpokọta iCloud Nchekwa gị.
Faịlụ dị na iCloud Drive gụrụ megide Nchekwa iCloud dịnụ.
iCloud Photo Library na-ebugo ma na-echekwa foto gị na vidiyo niile na iCloud ka ịnwere ike ịnweta ha site na ngwaọrụ gị niile. Onwere ihe di iche di nkpa di n’etiti iCloud Photo Library na iCloud ndabere nke ikwesiri ighota tupu anyi gaba.
Ngwaọrụ gị niile nwere ike ịnweta ma lelee foto nke ọ bụla echekwara na iCloud Photo Library. Ndabere iCloud dị iche: can’t nweghị ike ịhụ faịlụ ma ọ bụ foto ọ bụla na iCloud ndabere gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na foto bụ akụkụ nke nkwado ndabere. Ndabere iCloud bụ otu faịlụ buru ibu nke weghachite iPhone gị dum - ọ nweghị ụzọ ị ga-esi nweta faịlụ nke ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eji iCloud Photo Library na iCloud Backup, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ iji kwado otu foto ahụ ugboro abụọ: Otu oge na iCloud Photo Library, otu oge na iCloud ndabere gị.
Foto na vidiyo dị na iCloud Photo Library na-agụdaba na Nchekwa iCloud dị.
My Photo Stream (Ee, anyị na-agbakwunye onye ọzọ)
My Photo Stream na-ebugo foto ọhụrụ gị niile ma ziga ha na ngwaọrụ gị niile. Kindda ụdị dị ka iCloud Photo Library, nri? Mana enwere obere ihe:
Foto dị na Foto M iyi emela guo ebe nchekwa iCloud di.
’Re na-aga ngwọta, mana ọ dị mkpa ịghọta isi ihe dị iche na iCloud Photo Library na My Photo Stream tupu ị banye n'ime ndozi ahụ. Aga m akọwa ihe kpatara Nchekwa iCloud gị juputara na ibe na-esote.
Ibe (1 nke 3):